Revy Lôlô sy ny tariny : tsy ampy ireo mpankafy ny fiarahana… | NewsMada
Revy Lôlô sy ny tariny : tsy ampy ireo mpankafy ny fiarahana…
Nifanisa ny olona nisisika hiditra sy ny tao anatin’ny efitrano… Tsy tafiditra tao amin’ny Piment Café Behoririka avokoa ireo mpankafy ny “Revy Lôlô sy ny tariny”, ny alin’ny zoma lasa teo. Tsy matiantoka kosa ireo tsara vintana tafiditra mialoha, satria nampiaina indray ireo vazo tsy tontan’ny ela ry Benny, Bebey ary Sammy, mpikambana eto an-toerana amin’ny Lôlô sy ny tariny.
Nandrasan’ny olona fatratra, na efa mahazatra azy aza, ny “Izao aza tsahoana”, fanaon’i Bebey amin’ny gitara. Toraka izany koa ny “Tady vita fato-maty”, sns. Miavaka hatrany kosa anefa ireo hira ravahin’i Sammy amin’ny feon-dokangany, toa ny “Bilakarenjy”, izay niarahan’izy ireo nanatontosa tamina tovovavy mpankafy iray. Toraka izany ny “Rasoanantenaina Miangaly”, izay mahatohina ny fon’izay maheno foana…
Anisan’ny nitondra be ka nampiavaka ny fiarahana koa i Sefo Nônô. Na tsy mpikambana ao amin’ny Lôlô sy ny tariny aza izy, noporofoiny fa efa mpankafy hatry ny ela koa, ka sady mahafehy ny fitendrena ireo hira rehetra no nanampy tamin’ny feo ihany koa. Sambany ho an’ny mpijery rahateo ny nahita azy nihira sy nitendry irery… Tsy fahita firy fa hafa koa ny fampiaraham-peo nataon’i Benny sy Sammy, tamina hira iray noforonin’izy ireo.
Tsy mbola lefy laza ireo hira, ary miandrandra mafy ny fiarahan’ny tarika iray manontolo hatrany ireo mpankafy. Ho amin’ity taona ity ve?